Naannoo Amaaraatti Bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobit dargaggoota jaaree – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosNaannoo Amaaraatti Bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobit dargaggoota jaaree
Naannoo Amaaraatti Bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobit dargaggoota jaaree leenjii loltummaa kenneefii eebbisuu isaa rakkoo tokko malee himachaa jira
ONN LIVE:ONN LIVE: SAGALEE QEERROO WAXABAJJI 07 2019 |https://youtu.be/J0-1cEsU9ns Yuunversiitii D/Biraan keessatti barattoonni Oromoo haala yaaddessaa keessa jiru. Gocha gara jabeenyaa mootummaan keemikaala summaawaa fayyadamuun uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun hiriirri mormii Yuunversiitiiwwan fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti geggeeffamaa jira. Kaaba Oromiyaa Wallootti humni ijaaramee fi qindaa’e Mootummaa Naannoo Amaaraatiin deeggaramee uummata Oromoo Walloo irratti lola bane. Lixa Oromiyaa keessatti hidhaafi dararaan daran jabaatee itti fufe. Waraanni mootummaa taphataa kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee rasaasaan ajjeesan. | Yuunversiitii D/Biraan keessatti barattoonni Oromoo haala yaaddessaa keessa jiru. Gocha gara jabeenyaa mootummaan keemikaala summaawaa fayyadamuun uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun hiriirri mormii Yuunversiitiiwwan fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti geggeeffamaa jira. Kaaba Oromiyaa Wallootti humni ijaaramee fi qindaa’e Mootummaa Naannoo Amaaraatiin deeggaramee uummata Oromoo Walloo irratti lola bane. Lixa Oromiyaa keessatti hidhaafi dararaan daran jabaatee itti fufe. Waraanni mootummaa taphataa kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee rasaasaan ajjeesan.
Mirgi #Beelladootaa keenyaas eegamuu qaba. Fardi #kg 250 ulfaatu Farda Kg 140 qofa ulfaaturra taa’ee dugda kutuu hinqabu. Warri dhimmisaa isin ilaallatu dhimma kana hordofaa! Kan garbummaa keessa jiru nama keenya qofa miti. Fardi keenyallee ba’aa isheef hinmalle baataa jirti.
Naannoo Amaaraatti Bulchiinsi magaalaa Shawaa Roobit dargaggoota jaaree leenjii loltummaa kenneefii eebbisuu isaa rakkoo tokko malee himachaa jira. Ibsa eebba leenjii waraanaa kana irratti kenname keessatti akka diinaatti ibsamee ofirraa loluuf kan dhaatame eenyu akka tahe ifaa dha. Oromoo godina Kamisee ti. Leenjiin kun fuulduraafis akka itti fufu ibsameera. Oromoo godina Kamiseef mirgi akkasii akka hin kennamne ifaa dha. Walumaa galatti sochiin Amaarri itti jiru Oromoo dhahanii bakka duriitti deebisuun kooraa aangoo biyyattiitti deebi’uu dha. Kana ifatti kan godhaa jiru ADP isuma ODP waliin biyya bulchaa jiru.
Qabsoon Oromoon dhiiga isaatiin dhiibee asiin gahe Amaara irroomsee Oromoo yoo diigu argaa jirra. Kanaaf ammoo kan itti gaafatamu warra Amaara jalatti Oromoo salphisiisaa jiru OPDO/ODP dha. Gaafatama mootummaa qabanuun maraannaa ilmaan Nafxanyaa kana nurraa dhaabsisu jennee obsaan har’a gahuun keenya daranuu qilee nu buusuuf deemaa jira. Wanti mul’ataa jiru hundi waan ummata keenya obsa fixachiisu. Rogeeyyii fi dhaabota Oromoo biyya jiran biratti dubbiin keessa jirru kun yaaddoo jabaa tahee tarkaanfii sirreessiif maaliif akka sochoosuu dadhabe jarumaa fi Waaqa qofatu beeka.
Ethiopia: መረጃ – የደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ ግጭት አሁን ያለበት ሁኔታ | ኤርትራዊቷ ይርጋለም ለምን ተሸለመች? | የአዲስ አበባ ዘረፋ
[ጥብቅ መረጃ] በ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እና በ ጠ/ሚ አብይ አህመድ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት
Walllagga Bahaatti Marii Miseensotaa Geggeesuuf Eeyyama Nu Didan: Bakkabu’oota KFO